दलान नेपाल : सुनौली नाका खुलाउन भैरहवामा त्यत्रो वितण्डा ?
सुनौली नाका खुलाउन भैरहवामा त्यत्रो वितण्डा ?
at 10:11 PM Posted by Dalan
अघिल्लो विहिवार भैरहवामा आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा र थरुहटका नेता कार्यकर्तामाथी प्रतिकार भयो । प्रशासनले सम्प्रदायीक दंगा फैलन सक्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्दै तत्काल क्फर्यु जारी गरे । प्रशासनको क्फुर्यको सकने वितिकै भोली पल्ट फेरी अवस्था असहज बन्न थाल्यो । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको सुरक्षा समितीको बैठक बस्यो र त्याहा मधेशी र पहाडी समुदाय विच दंगा फैलाउन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै भैरहवा ५ दिने निषेध आज्ञा जारी गरियो । विहिवार प्रतिकारको समयमा गायव भएको एक जना शनिवार मृत फेला परे । प्रशासनकै कुरालाई यदी सत्य मान्ने हो भन्ने प्रश्न उठछ, किन भैरहवामा मधेशी र पहाडी समुदाय विच सम्प्रदायीक दंगा फैलिने अवस्था सिर्जना भयो ? के प्रशासनले भनेको यो कुरा सत्य हो त ?
यो कुरालाई पश्चिम मधेशमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय माहुरी होमको रिर्पोटले पनि पुष्टि गरीरहेको देखिन्छ । हालै भैरहवमा भएको घटना वारेमा माहुरी होमको प्रारम्भिक रिर्पोटको दोस्रो अनुच्छेदमै भनिएको छ, - ३ गतेको प्रतिकार पछि भैरहवाका गैर मधेशी समुदाय त्रासमा छ । रुपन्देहीको भैरहवा–लुम्बिनी सडक खण्डको बनगाइमा र भैरहवा–परासी सडक खण्डको धकधइमा मधेशी आन्दोलनकारीको बाक्लो उपस्थितीले कतै भैरहवाको गैर मधेशी माथि धावा बोल्ने त होइन् तथा भैरहवामा दिनभरि खुखुरी, रड, भाठा सहितका हतियार लिएर घुमिरहेका गैर मधेशी समुदायले कतै त्यहाका मधेशी समुदाय माथि पुनः धावा बोल्ने त होइन भनी दुबै तर्फ त्रास देखिन्थ्यो ।
यसरी दुवै समुदाय विच अत्यन्त्रै त्रासको वातावरण आखिर सिर्जना भयो कसरी ? भैरहवा घटनालाई नजिकवाट नियाली रहेका माहुरी होमका प्रमुख अधिकर्मी रवी ठाकुर भन्छन, यसको मुख्य कारण चाही थियो सुनोली नाका । उनका अनुसार प्रहरी प्रशासन मधेशी मोर्चा र थरुहट बन्दको कारण बन्द रहेको सुनौली नाका जसरी पनि खोलाउन रणनितीमा थियो । यही कुराको चाल पाएर आन्दोलनकारी घटकहरु भैरहवावाट सुनौली नाका सम्म ठुलो प्रर्दशनको तयारी गरेका थिए ३ भदौमा । त्यही अनुरुप मधेशी मोर्चा र थरुहटका अगुवाहरुले रुपन्देहीका गाउ गाउवाट भैरहवामा १० हजार भन्दा वढीको मासलाई जम्मा गरेका थिए । भैरहवावाट उक्त जमातलाई सुनोली नाका सम्मको नारा जुलुस गर्दै प्रर्दशन गर्ने र त्याहा वाट फर्के पछि सभामा परिणत गर्ने योजना थियो आन्द्योलनकारीहरुको । यो योजना प्रशासनलाई पनि जानकारी गराइएको थियो । तर मास भैरहवावाट निस्केको एक छिन मै केही त्याहाको पहाडी समुदायको स्थानियहरु माथी ढुगा प्रहार गरियो । अली अगाडी वढे पछि त पहाडी समुदायका प्रतिकारको नाउमा एउटा समुह आन्द्योलनकारीसंग मुठभेड गर्न पुगे ।
३ भदौमा भएको उक्र घटनाको सम्बन्धमा माहुरी होमको प्रारम्भिक अनुसन्धानात्मक रिर्पोट भन्छन,-
बिभिन्न मागहरु राखी आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र थरुहटको संयुक्त आन्दोलनमा होमिन पुगेका हजारौ जनताको अनियन्त्रित भीडले भैरहवा स्थित सीटी हास्पिटल र बिभिन्न होटेलका शीशाहरु तोडफोड र बैंक रोडमा दुईवटा मोटरसाईकल जलाउदै भैरहवा भंसार कार्यालय बन्द गराउन बेलहिया तर्फ जादै गर्दा स्थिति भिडन्तको रुप लिएको हो । प्रतिकारमा देवकोटा चोकमा राखिएको दुई वटा टे«क्टर र दर्जनौ मोटरसाईकिल जलाईएका छन् । युवा नेता सन्तोष पाण्डेको जीप समेत आगजनी भएको छ । यसैगरि मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक रुपन्देहीको कार्यालयमा समेत तोडफोड भएको छ । करिब पचास साठ्ठीको संख्यामा रहेका प्रतिकार समूहले मधेशी र थारु बिरोधि नारा लगाउदै प्रहरीको प्रत्यक्ष निगरानीमा तोडफोड गरेको नेता देबी प्रसाद चौधरीले बताएका छन् । सो समूहमा सादा पोशाकमा प्रहरी समेत रहेको उनको दाबी छ ।
यो रिर्पोटमा नेता देवी प्रसाद चौधरीको दावी र त्यसको भोली पल्टै कमठमाडौमा बसेको राज्य व्यवस्था समितीमा गृहमन्त्री र काग्रेस नेता अमरेश सिहको वाद प्रतिवादको वारेमा आएको समाचारले यसलाई थप पुष्टि गर्छन । समाचारमा आउ अनुसार काग्रेस नेता सिंहले गृहमन्त्री गौतमलाइ मधेशमा जारी आन्द्योलनमा प्रहरी भिजलान्तेहरुले अवस्था भडकाएरु हिंसात्मक बनाउन लागेको आरोप लगाएका थिए ।
तराई मधेशमा जारी आन्द्योलनलाई २० ओटै जिल्लामा अनुगमन गरीरहेको थर्ड एलायन्सको पनि प्रारम्भिक रिर्पोटले भैरहवामा प्रतिकारको नाउमा मधेशी समुदाय माथी भएको हिसांत्कम घटनामा प्रहरीको भुमिका अत्यन्तै शंकास्पद देखिएको उल्लेख छ । थर्ड एलाइन्सको रिर्पोटमा भनिएको छ, कतिपय ठाउमा प्रहरीकै निगरानीमा प्रतिकार समुदायका मानिसहरुले मधेशी आन्द्योलनकारीहरु माथी हाथपात गरेको देखियो ।
यसरी समान्य रुपमा आफनो राजनितीक एजेन्डाका साथमा सडक आन्द्योलन गरीरहेका समुदाय माथी आक्रममण गर्नु र समाजिक सदभाव नै विथोल्ने गरीको अवस्था सिर्जना गर्नुलाई गम्भ्रि रुपमा लिनु पर्ने कतिपयको तर्क छ । त्यसमा पनि प्रहरी प्रशासनको भुमिका अत्यन्तै शंकास्पद देखिनुले थप रहस्यमय छ भैरहवाको पछिल्ले घटना । माहुरी होमका प्रमुख अधिकारर्मी ठाकुर भन्छन, ३ गतेको भैरहवा घटना पछि बन्द सुनौली नाका सुचारु हुनु के संयोग मात्रै हो त ?